6-da Jid-gooyo ee Caalamka loogu raacayo E-Ganacsigaaga | Martech Zone
U wareejinta iibinta omnichannel ayaa si ballaaran u muuqata, oo ay dhowaan taageerayaan Dhaqdhaqaaqa Nike ee iibinta labada Amazon iyo Instagram. Si kastaba ha noqotee, u wareejinta ganacsiga iskutallaabtu ma sahlana. Ganacsatada iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa ku dadaalaya inay macluumaadka alaabada si joogto ah oo sax ah uga hayaan dhammaan meheradaha - si aad u badan oo 78% ganacsatadu aysan si fudud ula socon karin dalabaadka macaamiisha ee hufnaanta ah.
45% ganacsatada iyo alaab-qeybiyeyaasha ayaa lumiyey $ 1 + mil oo dakhli ah sababo la xiriira caqabado soo food saaray markii ay ku milmayeen awoodda is-dhaafsiga istiraatiijiyaddooda ganacsi.
1WorldSync, Bixiyaha hormuudka u ah xallinta waxyaabaha ka kooban sheyga, ayaa dhowaan soo saaray infographic-ka hoose ee ku saleysan Udejinta Koorsada Ganacsiga Caalamiga ah daraasadda.
Soo Degso Daraasadda
Jidgooyooyin Caan ah oo loo maro Global with E-Commerce
Infographic wuxuu muujinayaa caqabadaha guud ee ka imanaya ganacsatada iyo alaab-qeybiyeyaasha, iyo sidoo kale sida hoggaamiyeyaasha suuqyadu uga gudbayaan isbaarooyinkaas adeegsiga nidaamyada macluumaadka alaabada daruurta ku saleysan.
xiriiriyaan - Nidaamyada macluumaadka badeecadaha jira ma bixiyaan hal madal oo lagu dejiyo laguna beddelo nuxurka wax soo saarka tayada leh lala-hawlgalayaasha ganacsiga.
Exchange - Nidaamyada macluumaadka badeecadaha jira ma buuxinayaan heerarka ay la-hawlgalayaasha ganacsi la leeyihiin.
Compliance - alaab-qeybiyeyaasha ayaa ku dhibtoonaya inay la socdaan heerar kala duwan oo sharciyeyn ah oo ku baahsan waddamada.
Tayada - ganacsatadu ma bixin karaan wax soo jiidasho leh, oo ku lug leh sharraxaadda wax soo saarka iyo sawirrada si toos ah looga helo wada-hawlgalayaasha alaab-qeybiyeyaasha.
omnichannel - baayacmushtariyaashu waxay u halgamayaan isku-darka iyo u-qaybinta macluumaadka wax soo saarka oo dhammaystiran, joogto ah, oo lagu kalsoon yahay dhammaan kanaallada.
Transparency - ganacsatadu lama socon karaan baahida macaamiisha ee la xoojiyay ee hufnaanta wax soo saarka.
Tags: 1worldsyncAmazoncaqabadahanidaamyada macluumaadka alaabada daruurta ku saleysanwaafaqsanaantaganacsiga adduunkacaqabadaha ganacsiga adduunkawaafaqsanaanta caalamiga ahisku xidhka caalamiga ahganacsiga caalamiga ah ee elektaroonigga ahcaqabadaha ganacsiga caalamiga ahisweydaarsiga adduunkaomnichannel caalami ahdaahfurnaan caalami ahInstagramganacsiga instagramNikenidaamyada macluumaadka alaabta
Fireside: Websaydh Podcast fudud, Marti gelin, iyo Falanqeyn
Ma Ku Saabsan Naga Bogga Ma Raacdaa Dhaqammadaan Ugu Wanaagsan?
Agoosto 30, 2017 saacaddu markay ahayd 12:43 PM
Baadhitaankeenna ah inaan ku darno badeecadaha maraakiibta ka imanaya Shiinaha, waxaad moodaa inay jirto hal arrin oo joogto ah, waxayna umuuqataa inaad madaxa ku dhufatay ciddiyaha. Waa isgaarsiin casri ah iyo kalsooni. Mid, waa inaad hubisaa inaad adiga (iyo kan wax iibinaya) aad ku wada hadlaysaan isku luuqad ahaan macno ahaan iyo qaab ahaanba.
Nasiib wanaag ayaan helnay, waxaanan taas ku idhi iyadoo carrab la DULMARO dhabanka ku haya, Maraykanka si aan uga sii ahaado nidaamka mitirku inuu yahay habka loo cabbiro iyo loo miisaamo walxaha.
Intaa waxaa dheer, waxaa jira arrinta lacagta. Lacagta si deg deg ah ayey isku bedbeddelaysaa, wixii mar ahaan karay heshiis weyn oo garqaad ayaa si dhakhso leh ugu beddeli kara heshiis aan sidaa u sii weyneyn ka dib. Adduunyada maraakiibta dhoofisa, waa inay tagtaa adigoon dhihin waxaad rajeyneysaa oo aad u duceyneysaa in markabkaaga uu fahmay codsigii ahaa inay ka waantoobaan ogeysiinta iibsadaha inuu ogaado inaad kaliya bixin laheyd .75 kuwa yaryar ee loo yaqaan 'cat kitt', halka iyagu ay kaliya lacag ku siiyay 9. Xoogaa isgaarsiin ah runtii.
Dhammaantood waxay ku yimaadaan xiriir wanaagsan. Waxaan rajeyneynaa sida aan u isticmaalno qaabab isku mid ah SaaS, awoodda isgaarsiinta ayaa aad u fududaan doonta.
Hadda markaan qoro intaas oo dhan, waa inaan dhaho, "Ditto". 😉